I-Loft "I-Graphic Shelf" - I-Airbnb
I-Loft "I-Graphic Shelf"
I-loft enhle enendawo eyodwa ehlukaniswe ikhishi kanye negumbi lokugezela elincane, elinombhede ophindwe kabili kanye nombhede omusha wosofa, ifenisha yesitayela esincane esifushane itholakala enhliziyweni yedolobha, ibhulokhi elilodwa ukusuka e-Zócalo, elinentshisekelo yezivakashi futhi ingcebo eningi Cultural, sizungezwe amagalari namamyuziyemu, itholakala phansi phezulu yethu Tingladography yobuciko, indlu Porfirian-isitayela, esinye sezakhiwo kakhulu amahle efakwe ohlwini e Oaxaca.
"I-El Tinglado Grafico" iyindawo ethule enomlingisi lapho ungaphumula khona uzungezwe imisebenzi yobuciko, izincwadi zezithombe nezinto ezinomphefumulo (ezithengiswa kakhulu) endlini eyiqiniso kusukela ekuqaleni kwekhulu leminyaka elidlule.
Ukufinyelela efulethini kusezingeni lokuqala futhi kunomakhelwane oyedwa kuphela obhekene naye.
Maduze sizoba nezindawo zokuhlala zabaculi bakuleli nabakwamanye amazwe.
4.75 out of 5 stars from 85 reviews
4.75 · 85 okushiwo abanye
Ngaphakathi kwesakhiwo ungathola i-pizzeria enhle, isitolo esihle sokugunda izinwele nezitolo ezimbili zezimpahla zabaklami nokunye; Ezindaweni ezizungezile kunezindawo zokudlela ezinhle, izitolo zendwangu, nezindawo zokudlela ezinhle kanye nebhikawozi elihle kakhulu. (maphakathi ne-Oaxaca yonke into iseduze .....)
Ngokuba negalari nokuba abathandi bezobuciko sithanda ukwamukela umphakathi onentshisekelo kwezobuciko, sinolwazi ngezinye izindawo zobuciko, ukuvakashela izitudiyo zamaciko, ukuvakasha kanye nolwazi ngezithombe eziqoshiwe ezisedolobheni noma ezizungezile kanye neziphakamiso zemibukiso.
Ngokuba negalari nokuba abathandi bezobuciko sithanda ukwamukela umphakathi onentshisekelo kwezobuciko, sinolwazi ngezinye izindawo zobuciko, ukuvakashela izitudiyo zamaciko, ukuva…